Indlu yesikolo esiDala kwiFama yaseKirriemuir
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguAlison
Le yindawo ebanzi, yangoku, ye-1st floor yestudiyo esecaleni kwekhaya lethu. Ifakwe ngokupheleleyo kumgangatho ophezulu kunye nazo zonke iimod cons. Iqaqambile kwaye inomoya enembono entle phezu kwehlathi eliqolileyo lomthi olukhuni. Imi kwifama esebenzayo yeegusha. Ifikeleleka kwiDolophu yaseSligo (imizuzu eli-10 yokuqhuba), iHotele yeCastledargan kunye neKhosi yeGalufa (imizuzu emi-2 yokuqhuba), iMarkree Castle (imizuzu emi-5 yokuqhuba), uhambo oluphezulu kunye namahlathi, kunye neelwandle ezidumileyo zehlabathi.
Qaphela - olu luhlu 'luphila' kwaye lukhona oluchanekileyo - ungabhukisha ngoko nangoko - akukho mfuneko yokubuza. Ukuba kukho ukufumaneka - ikhalenda ichanekile :) Kwakhona indawo engeyiyo yokutshaya
**UHLAZIYO lweCOVID 19**
Siyithathela ingqalelo kakhulu impilo-ntle yeendwendwe zethu. Ukukhusela impilo yazo zonke iindwendwe zethu, le nkqubo yokucoca ilandelayo iphunyeziwe:
- Onke amagumbi aya kungena umoya kakuhle phambi kokuba iindwendwe zifike
- Zonke iimpompo, iziphatho zocango, njl
- Yonke ilinen kunye neetawuli ziya kuhlanjwa ngeqondo lobushushu eliphezulu kangangoko
- Impahla ekhuselayo iya kunxitywa ngexesha lokucoca.
-Siza kuzama ukwenza ukuhlala kwakho kukhuseleke kangangoko sinakho.
I-STUDIO KUXHOXWE NGESANITIZER ESANDLA NGOKUZENZAKALELAYO KUNYE NEIGVVVVVU EZILAHLWAYO UKUSETYENZISWA LENDENDWE.
Sinikezela ngemfihlo epheleleyo njengoko le iyindlu ezimeleyo yomgangatho woku-1, efikelelekayo ngokungena kwayo, ekufuphi nabanini bamakhaya aneendawo zokupaka ezifanelekileyo. Abona bantu baninzi bahlala abantu abadala aba-2 kunye nomntwana omnye.
Ibhedi ekhululekileyo ye-King Size kunye nebhedi eyongezelelweyo yomntwana okhoyo ngokucelwa okanye i-cot yokuhamba nayo iyafumaneka. Iilinen zebhedi, iitawuli kunye nezinto zangasese zibonelelwe.
Imi kwifama encinci esebenzayo yeegusha, ukuba uhlala ngexesha elifanelekileyo lonyaka usenokufumana nokondla amatakane afuywayo!
Ngaphantsi kwemizuzu emi-3 ukuya eCastledargan Hotel & kwikhosi yeGalufa kunye nemizuzu emi-5 yokuqhuba usuka eMarkree Castle.
Sihamba ngemizuzu emi-2 ukusuka ukufikelela kwiSligo Way. Imizuzu eyi-10 ukusuka kwidolophu yaseSligo. Imizuzu engama-20 ukusuka kwiilwandle ezikufutshane. Ukufikelela kwiNdlela eMangalisayo yaseWild Atlantic yimizuzu nje emi-5 yokuqhuba.
Imisebenzi emininzi ekhoyo kwindawo efana nokubheqa i-SUP, i-kayaking, ukuloba, ukukhwela ibhayisekile intaba, ukukhwela amahashe, ukusefa, igalufa, induli, iSligo Race njl. Ibekwe ngokufanelekileyo ukujonga iYeats County entle, iLissadell House, iWild Atlantic Way nangaphaya, kunye neSligo Food Trail. I-Cultural Sligo isijikelezile nge-Yeats Summer School, uMboniso weModeli kunye nendawo yoMculo, iMyuziyam yeSiqithi saseSligo kunye neeHawks Well Theatre yonke phakathi kwemizuzu eyi-10 yokuqhuba.
Ilizwe elaziwa ngokuba yiLake Isle yase-Inisfree, engafiyo ngumbongo weYeats kukuhamba nje ngemizuzu eli-15.
Umnini uhlala ekhona ukuze aphendule nayiphi na imibuzo okanye acebise ngohambo losuku lwasekuhlaleni njl.njl.
4.98 ·Izimvo eziyi-407
4.98 out of 5 stars from 407 reviews
4.98 · Izimvo eziyi-407
Ukufikelela kwiindlela zehlathi kwi-Union Wood kunye ne-Union Rock 2 imizuzu yokuhamba. Oku kukwabonelela ngokufikelela kwiSligo Way kunye neLoch Lumann kubakhweli. Ichibi laseBallygawley elinendawo yepikiniki luhambo lwemizuzu eli-10. Ikhosi yeGalufa ekufutshane (Castledargan) 2km. Ibha ekufutshane yiCallaghans (800m) eyindawo yosapho epholileyo enomlilo ovulekileyo. Ivenkile ekufutshane iku 1km ukusuka elalini. Iilwandle ezikufutshane yi-20min drive. Idolophu yaseSligo 10min.
Umamkeli osoloko ekhona ukunceda ngayo nayiphi na imibuzo okanye ukucebisa ngohambo oluhle lweentsuku zasekhaya, uhambo, uhambo njl